Izindaba - Isikhumbuzo seminyaka engu-15 seTaizhou Lujury Technology Co., Ltd.
UWu Yunfu, usihlalo weTaizhou Lujury Technology Co, Ltd., kanye noZhang Juqin, umphathi jikelele wenkampani, bahlangane ndawonye nabamele abahlinzeki abangaphezu kwama-30 futhi baba nokushintshana okunobungani nokujule.
Ukubizwa kwengqungquthela akusho nje ukuthi iLujury Technology izokwamukela inkathi entsha ngokubukeka okusha, kepha futhi kusho ukuthi iLujuryTechnology izobhekisisa kakhulu abaphathi bezinsizakusebenza kanye nezinga lokusebenzisana nabaphakeli.
Emhlanganweni, uSihlalo uWu Yunfu wethule inkulumo futhi wenza inkulumo yosuku. Uzwakalise ukubonga kwinani elikhulu labahlinzeki ngokubambisana kwabo ngobuqotho kanye nokwesekwa kwesikhathi eside.
Ngokwesisekelo sokuhlaziywa okujulile kwesimo semboni samanje, uphakamise izinhloso nemibono yokuthuthukiswa kwamasu okuzayo, wakhuthaza ukucabanga okusha ukuxazulula izinkinga, futhi walwela ukuzuza amazinga aphezulu embonini. Ngasikhathi sinye, ibeka phambili okulindelwe nezimfuneko zokuxhumana nokubambisana.
Okokuqala, gqugquzela ukuxhumana okulula nokuqondile, ungacabangi ukuthi izinto ziyinkimbinkimbi kakhulu;
Okwesibili, ubuqotho, uma kukhulunywa ngokwenza, ungakhohlwa inhliziyo yokuqala, njengenjwayelo;
Okwesithathu, abalingani babalingani bangazuza ukuphelela emkhakheni wabo wemboni;
Okwesine, indlela yokuziphatha, ukubambisana ngobuqotho, ukufuna indawo esivumelana ngayo ngenkathi sigcina umehluko, futhi sibeke izinkinga ngokushesha, kulula ukuzixazulula ngesikhathi esifanele.
UZhang Juqin, imenenja jikelele yeLujuryTechnology, uthe enkulumweni yakhe ubabonga kakhulu abahlinzeki ngeminikelo yabo nemizamo yabo yokwenza ikhwalithi yemikhiqizo yenkampani. Imikhiqizo yenkampani ayinakwehlukaniswa nezingxenye zabahlinzeki, futhi ingxenye ngayinye iyisiqinisekiso sekhwalithi yomkhiqizo.
UNkk Zhang ugcizelele ukuthi ngokuzayo, kuzoqinisa ukuphathwa kohlelo lokuhlinzekwa kwezinto, futhi kuhlinzeke ngemiqondo ehlukahlukene yokuphatha esezingeni eliphakeme kubahlinzeki. Lezi zinhlangothi zombili zizobambisana ngokujulile ukukhuthaza ukusebenza kahle kwezinto zombili izinhlangothi, ukunciphisa izindleko zokusebenza nokwakha ibhizinisi elikhulu. inani. Ukholelwa ngokuqinile ukuthi njengoba inkampani iqhubeka nokukhula, ukubambisana phakathi kwalezi zinhlangothi zombili kuzoba seduze futhi ngokubambisana ukuvuna izithelo zempumelelo.
Esikhathini esisha, iTaizhou Lujury Technology Co, Ltd Association izophendula ngenkuthalo kunqubomgomo kazwelonke futhi ihambisane nezikhathi zokufaka isandla ekuthuthukiseni imboni entsha yezimoto zamandla kagesi yaseChina, isebenzisa umoya wesikulufu futhi ibambe ikhwalithi.